သငျသညျအင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့လိုအပ်သလား? You can learn English online with USAHello and Learnship Global English. သငျသညျအခမဲ့များအတွက်သင်တန်းများယူနိုင်ပါသည်.
သငျသညျအိမ်မှာအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, သငျသညျ USAHello မှတစ်ဆင့် sign up ကိုရသောအခါနှင့်အတန်းအခမဲ့များမှာ. Usually they cost $400 forayear! နားလည်ရန်မည်သို့မည်ပုံသိမှတ်ကြလော့, speak and write English will help you at your job and in your life.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်တိုင်းအဆင့်အတန်းကမ်းလှမ်း. သငျသညျ sign up ကိုပြီးနောက်, သငျသညျသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အဆင့်ကိုတွေ့မြင်ရန်စမ်းသပ်မှုယူပါလိမ့်မယ်. သို့ပြုလျှင်သင်၏အင်္ဂလိပ်တိုးတက်စေရန်သင့်ရဲ့လူတန်းစားစတင်ရန်! အဆိုပါသင်ခန်းစာများကိုဗီဒီယိုများပါဝင်သည်, စမ်းသပ်မှုများ, နားထောင်ခြင်းအလေ့အကျင့်, နှင့်အလေ့အကျင့်စကားပြော. သငျသညျသဒ်ဒါနှင့်အသစ်စကားလုံးများကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်.
သင်တို့သည်ဤဘာသာစကားများကို Global အင်္ဂလိပ်အတန်းယူနိုင်ပါသည်:
စပိန် (Latin American)
You can sign up anytime in 2020, and your membership will last for one year. ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ အခမဲ့သင်တန်းတွေတက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်. We only need an email address to sign you up. Your email address will be your user name. When you are registered, you can create our own password.